गण्डकी प्रदेशको बजेट कस्तो अउदैछ ? हेर्नुहोस – Samacharpati Samacharpati गण्डकी प्रदेशको बजेट कस्तो अउदैछ ? हेर्नुहोस – Samacharpati
पोखरा १ असार । आज गण्डकी प्रदेश सहित सात वटै प्रदेशले आ.व २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
देशमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै छ, लामो समयको लकडाउनले देशको आर्थिक क्षेत्रमा निकै असर परेको छ, यो बीचमा आउन लागेको बजेटलाई सर्वसाधारणले निकै महत्वका साथ हेरेका छन् । कस्तो बजेट आउँछ भन्ने सबैको चासो छ । तर प्राय प्रदेशले स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदै छन् । सबैजसो प्रदेशमा चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार घट्दै छ ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कोरोना केन्द्रीत रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण बजेटको आकार केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
जेठ १४ मा मन्त्री गुरुङले आगामी बजेटमा कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश गौरवका आयोजनालगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनु भएको थियो । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सोहीअनुसार बजेट आउने उहाँको भनाइ छ ।
यसपटक कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असर न्यूनीकरण गर्न प्रदेशले बजेट केन्द्रित गर्दै छ । कोभिड–१९ नै प्राथमिकतामा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव धु्रव पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि चालु आवकै विकास निर्माणका योजनालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट आउनेछ ।
कास्कीस्थित झोवाङको शीतल गुफा पर्यटकको पर्खाइमा